आँप खाँदै हुनुहुन्छ ? यी समस्या देखिन सक्छन्  Clickmandu
आँप खाँदै हुनुहुन्छ ? यी समस्या देखिन सक्छन्
क्लिकमान्डु २०७५ असार २६ गते १७:०२ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । यो आँपको मौसम हो । धेरैको घरमा यो मौसममा फलफुलको रुपमा आँप खाने गरिन्छ । बजारमा पनि थरिथरिका आँप उपलब्ध छन् । आँपलाई फलको राजा पनि भन्छन् । अझ कतितय मानिस त मौसम अनुसारको फल खानुपर्छ भनेर आँप खाईरहेका हुन्छन् ।
गर्मीको समयमा आँप निकै रुचाईने फल हो । आँपमा प्रशस्तै पोषक तत्वपनि पाईन्छ । आँपमा भिटामिन ए, कपर आईरन र पोटाशियम जस्ता तत्व हुन्छन् ।
आँपका धेरै फाईदा भएपनि यसका बेफाईदापनि छन् ।
आँपको भेट्ना(बिन्दु)मा तरल पदार्थ जमेको हुन्छन् । आँप खानुभन्दा अगाडि राम्रोसंग नपखालीकन आँप खाएमा, यो तरल पदार्थले आँपको स्वाद विगार्छ । जिब्रो टर्रो बनाउने गर्छ । आँपमा पाईने यो तरल पदार्थले स्वाद विगार्नुको अलावा दाद, छाला चिलाउने या खटिरा आउन सक्ने समस्या समेत निम्त्याउँछ । यो पदार्थले घाँटीको समस्यापनि सिर्जना गर्न सक्छ ।
आँपमा पाईने धेरै पोषक तत्वहरु सबैको शरीरले एकैपटक पचाउन सक्दैन् । त्यसमाथि पाचन प्रणालीमा समस्या भएका मानिसले आँप खाएपछि पखाला लाग्ने संभावना अत्याधिक हुन्छ । सामान्य मानिसले पनि धेरै आँप खाएमा पखाला वा आउँको समस्या देखिन सक्छ ।
आँपले शरीरमा गर्मी उत्पन्न गराउँछ । धेरै आँप खानाले अनुहारमा डन्डिफोर र शरीरमा खटिरा देखिन सक्छन् । छालाको एलर्जी भएका मानिसले आँप नखानु नै बेस हुन्छ ।
यस्तो विमारी भएकाले खानु हुँदैन आँप
युरिक एसिडको समस्या भएका मानिसले आँप नखानु नै बेस मानिन्छ । त्यस्तै रुघा लागिरहने समस्या भएका(साईनाईस) मानिसले आँप खाएमा रोग बल्झिने खतरा हुन्छ । आँपमा अत्याधिक पोषण हुने भएकाले तौल घटाईरहेका मानिसले आँप नखानु नै बेस हुन्छ । यसबाहेक मधुमेहका रोगीले पनि आँप खानु हुँदैन् ।
आलोचना रोक्न ज्ञानेन्द्रले फोन काटेका थिए, सरकारले सामाजिक संजाल बन्दगर्न खोज्यो: गगन थापा
नेकपा सांसद् योगेश भट्टराई भन्छन्ः फेसबुकले नेपालमा १३ अर्ब लैजान्छ, दर्ता गर्नु पर्दैन ?
खानेपानी मन्त्री मगरलाई संसदमा प्रश्न- मेलम्चीको खानेपानी कहिले आउँछ ? मन्त्री भन्छिन्- अन्तिम चरणमा
यसकारण अघि बढेन पेप्सीकोला-सल्लाघारी सडक विस्तार